ဖယ်ရှားပစ်ရပုံကို - မျက်နှာပေါ်မှာကျယ်ဝန်းအပေါက်? အိမ်မှာနှင့်အလှပြင်ဆိုင်များတွင်မျက်နှာပေါ်မှာချွေးပေါက်ကျဉ်းမြောင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မျက်နှာပေါ်မှာကျယ်ဝန်းအပေါက် - အပြစ်အနာအဆာများဖယ်ရှားခြင်းရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
စုံလင်သောအသားအရေနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့တစ်ခုတည်းကိုသာရတဲ့အရာတွေမဂ္ဂဇင်းများ၏စာမျက်နှာများပေါ်တွင်တည်ရှိ။ စစ်မှန်သောဘဝမှာတော့မိန်းကလေးနေဆဲကျယ်ပြန့်ပေါက်အပါအဝင်အများအပြားအရေပြားပြဿနာများ, နှငျ့ရငျဆိုငျနေတဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိထိရောက်ရောက်ဒီချို့တဲ့တိုက်ဖျက်ရေးအထူးအလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များနှင့်ကုသတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျယ်ဝန်းအပေါက် - အကြောင်းရင်းများ
ဤရွေ့ကားချွတ်ယွင်းမကြာခဏအပျိုဖော်ဝင် (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်) ၏အစအဦးမှာပေါ်လာမည်။ ကြီးမားတဲ့အပေါက်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရာ၏အဓိကအချက်တစ်ချက်, တစ်မျိုးဗီဇဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်။ ထိုပြဿနာများ၏အခြားသောအကြောင်းတရားများ:
ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ် အဆီပြန်အသားအရေ ;
(အထူးသဖြင့်အသက် 30 ပြီးနောက်) အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကို။
တစ်ဦးအလှကုန်ပစ္စည်းအားနည်းချက်ကြောင့်နှိုးဆော်ခြင်းသောအချက်များပေါ်တွင် မူတည်. ချိန်ညှိနေသည်ဖော်ပြသည်။ ကြောင့်မျိုးရိုးအလိုက်, အသက်, ဒါမှမဟုတ်နောက်ခံအဆီ, အအရေပြားအပေါ်ယံ၏စုစုပေါင်းအမျိုးအစားမှဖွဲ့စည်းသောမျက်နှာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်ပေါက်လျှင်, သူတို့သည်သိသိသာသာကျဉ်းမရနိုင်ပါ။ ဤအခွအေနမြေားမှာအပြစ်အနာအဆာအရေပြားနှင့်တစ်ဦးကောင်းစွာ-ကသူ၏မျက်နှာဖုံး၏တစ်ဦးချင်းအင်္ဂါရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
မျက်နှာပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အပေါက်ရောဂါများစွဲလမ်း, ဒါမှမဟုတ်မလျော်ကန်သောစောင့်ရှောက်မှုအရေပြားအပေါ်ယံကြောင့်ပေါ်ထွန်းသောအခါ, သူတို့သိသိသာသာကျဉ်းနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, (, ရောဂါကိုပျောက်ကင်းစေဟော်မုန်းဟန်ချက် restore အခြားအလှကုန်ကောက်ရန်) ပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ထို့အပြင်အသက်လမ်းကိုပြောင်းလဲရှိသည်:
ဒီထက် sunbathing နှင့်ဆိုလာရီယံအလည်အပတ်ခရီး။
အလွယ်ကူဆုံး option ကို - အဆင်သင့်လုပ်အလှကုန်ကိုဝယ်ယူရန်နှင့်မှန်မှန်ပြဿနာဒေသများသို့လျှောက်ထားရန်။ အရည်အသွေးမျက်နှာဖုံး, ချွေးပေါက်တင်းကြပ်အောက်ပါပစ္စည်းများကနေရှေးခယျြခံရနိုင်သည်
Laneige ပေါက်အနည်းငယ်မျှသာ Pack ကို;
TonyMoly ဥပေါက် Pack ကိုအေးတင်းကျပ်;
BHA Pack ကိုတင်းကျပ် Manyo ပေါက်;
Demax convergence ပေါက်မျက်နှာဖုံး;
မျက်နှာဖုံးတင်းကျပ် Missha က Black Ghassoul;
Scinic အားလုံး Dau Fine ပေါက်ရွှံ့စေးမျက်နှာဖုံး;
အများဆုံးကသဘာဝအလှကုန်ပိုနှစ်သက်သူကိုအမျိုးသမီးများ, အဲဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ချက်ပြုတ်ရန်အကြံပြုသည်။ တစ်ဦးတည်းသာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအပါအဝင် 10 မိနစ်ချက်ပြုတ်နည်းများမျက်နှာဖုံးများရှိပါတယ်:
Multicomponent မျက်နှာဖုံး, ချွေးပေါက်တင်းကြပ်
အာလူးကစီဓါတ်ပါ - 5.8 ဂရမ်;
။ Fine ဆား - ဆလိုက်ခြင်းမရှိဘဲ 1 Tsp,
ပျားရည် - 5.7 ml ကို;
နို့နွေး - ။ -1 Tsp ။
ဿုံအလှကုန်ကိုပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီးအသားအရေဆေးကြောပြီးနောက်ရှာနေမိတ်ဆက်အမြင်, အမြင်သာအားနည်းချက်တွေကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်။ မျက်နှာကိုလုပ်သူများအပေါ်ကျယ်ဝန်းအပေါက်ကဤကိုချကျဉ်းမြောင်းဖို့ကူညီပေးပါ:
Lumene, Matt Touch ကို;
လျှို့ဝှက် Key ကိုစုန်းမ-Hazel;
အစိမ်းရောင် Mama Tonique နီရှင်းလင်း;
Mediva ကို T-Zone ကို;
Payot Tonique စင်ကြယ်စေ။
ဒီချွတ်ယွင်းဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့ရိုးရာဆေးပညာကိုပြောပြလိမ့်မယ် - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမျက်နှာပေါ်မှာကျယ်ဝန်းအပေါက်လျှော့ချဖို့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းကွိုတငျပွငျဆငျနိုငျပါ။ သဘာဝဂရုစိုက်တတ်တဲ့ထုတ်ကုန်လျင်မြန်စွာပြုမူခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလှကုန်ထက်ပိုကောင်းတဲ့, ဒါပေမယ့်အများကြီးစျေးသက်သာ။ ကျယ်ပြန့်အပေါက်ကျဉ်းမြောင်းအဘို့အထိုသို့သောအဖြေတစ်ခုထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
နှင်းဆီရေ - 100 ml ကို;
Rosemary မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ -5ပေါက်;
လတ်ဆတ်တဲ့ထုံးဖျော်ရည် - 0.5 Tsp ..
စင်ကြယ်သောဖန်ထည်အတွက်တုန်လှုပ် components ။
ဒီအလှကုန်၏အခြားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နက်ရှိုင်းသောစင်ကြယ်စေခြင်းနှင့်အသားအရေ Tone ပေးပါသည်။ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အပေါက်လိမ်း, သွေးရည်ကြည်, သို့မဟုတ်အခြားအားကောင်းတဲ့နည်းလမ်းသုံးပြီးခင်မှာပိုကောင်းယခင်ကလိမ်း၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုဖို့:
TonyMoly ငါရီးရဲလ်လက်ဖက်ရည် Tree တယ်;
Etude House ရဲ့ AC အဆေးခန်းနေ့စဉ်;
အကယ်ဒမီ lotion Normalisante;
အဆိုပါအရေပြားအိမ် lotion တင်းကျပ်;
Paula ရဲ့ရွေးချယ်မှု 2% BHA lotion;
အိမ်လုပ် lotion အဘို့အကြော်
chamomile ပန်းပွင့် - 10 ဂရမ်,
linden အပွင့် - 10 ဂရမ်,
ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ - 180 ml ကို;
လတ်ဆတ်သောသံပုရာ - 1 tbsp ။ ဇွန်း,
ပျားရည် -5ml ။
ဘီယာအရက်ချက်သောဟင်းသီးဟင်းရွက် 40 မိနစ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုဖို့, ရေပြုတ်။
ဖြေရှင်းချက် strain, လတ်ဆတ်ညှစ် Citrus အသီးဖျော်ရည်များနှင့်ပျားရည်ထည့်ပါ။
အရေပြားဆီနံနက်နှင့်ညနေပိုင်း Wipe ။
အဆိုပါဖော်ပြထားအလှကုန်ထုတ်ကုန်၏အဓိကအားသာချက်က၎င်း၏ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သက်ရောက်သည်။ လွတ်လပ်စွာမျက်နှာပေါ်မှာကျယ်ဝန်းအပေါက်ကိုလျှော့ချဖို့သွေးရည်ကြည်ထုတ်လုပ်ပါကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများ၏မိတ်ကပ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်ဒါကြောင့်အိမ်မှာ, အစိတျအပိုငျးမြား၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအာရုံစူးစိုက်မှုအောင်မြင်ရန်လို့မရပါဘူး။
Estée Lauder က Idealist အပေါက်အနည်းငယ်မျှသာအရေပြား Refinisher;
Clinique ပေါက်သန့်စင်ပြီး Solutions;
Yves Saint Laurent ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်သန့်စင်ပြီး;
Clarins ပေါက်အနည်းငယ်မျှသာ Serum;
P ကို ​​Serum တင်းကျပ် ElishaCoy ပေါက်;
Holika Holika ပေါက်ပင်လယ်ပြင်ပင်မ;
Plus အား Serum တင်းကျပ်အဆိုပါအရေပြားအိမ်;
CNC ကိုရှင်းလင်းရန်အရေပြား Complex;
ယခင်ရန်ပုံငွေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခိုင်မာအောင်နှင့်တစ်နေ့တာအတွင်းကောင်းမွန်စွာဆောင်ဖို့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူအသားအရေကိုထောက်ပံ့ပေးကူညီအလှကုန်အမျိုးအစား။ A ကောင်းဆုံးမုန့်သင်တို့သည်ဤအမှတ်တံဆိပ်အကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, သင့်မျက်နှာပေါ်ရှိချွေးပေါက်တင်းကြပ်:
ဒါဟာအရေပြားလက်တွေ့ဖြေရှင်းနည်း Cream ပေါက်င်;
Dior Hydra ဘဝကပိတ်-Up ကို;
TonyMoly အဆိုပါလတ်ဆတ် Phytoncide;
D'Wonder Cream ပေါက်တင်းကျပ် & သန့်စင်ပြီးပွေးလေ၏
A'pieu ကျောက်ခေတ် Peach ပေါက်နည်းသောဦးပိုင် Cream;
Etude House ရဲ့ Wonder ပေါက်;
ဒေါက်တာ Brandt အဘယ်သူမျှမပိုပေါက် Effect Pores;
ချွေးပေါက် Perfector ချောမွေ့ Bobbi Brown အရေပြား။
အဓိကအားဖြင့်ပြည်တွင်း၌အသုံးပြုကြသည်ထားတဲ့အများအပြားထုတ်ကုန်များနှင့်ပိုပြီးပြင်းထန်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကနှာခေါင်းအပေါ်နှင့် T-ဇုန်အတွက်ဘယ်လောက်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အပေါက်၏မေးခွန်းကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ အရည်အသွေးဆိုလိုတယ်:
la Roche-Posay Effaclar AI အ;
Mizon က Black Clean Up ကိုပေါက်;
Vichy NormaDerm Hyalu ပြောက်;
လျှို့ဝှက် Key ကို Black ကထဲကချွေးပေါက်;
မြို့ပြ Decay ပေါက်စုံလင်သော။
တစ်ခါတစ်ရံပင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်မကူညီဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ပါကမျက်နှာပေါ်မှာချွေးပေါက်ကျဉ်းမြောင်းများအတွက်အလှပြင်ဆိုင်ကုသမှုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ရွေးချယ်ထားကိုင်တွယ်ပေါ် မူတည်. 5-15 ကုသမှု, ပြီးနောက်, ရလဒ်များကိုပြင်းထန်ခြင်းနှင့်မြဲဖြစ်လိမ့်မည်။ အရေပြားဆန့်နှင့်၎င်း၏မူရင်းအခြေအနေမှပြန်လာလေ့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တန်းများ, အခါအားလျော်စွာထပ်ခါတလဲလဲခံရဖို့ရှိသည်။
သင်ကျယ်ဝန်းအပေါက်ကိုဖယ်ရှားချင်တယ်ဆိုရင်, ကုသမှု, ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ပုံစံအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်:
glycol, အက်ဆစ်, ဓာတု, enzymatic နှင့်ကွာ၏အခြားအမျိုးအစားများ;
microcurrent ကုထုံးနှင့် ultrasound;
အိုင်းနှင့် phonophoresis ။
ဆိကြည်ဂလင်း၏အလွန်အကျွံလှုပ်ရှားမှုအထူးကျန်းမာရေးအလှကုန်ကောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ sebum များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းညှိသင့်တယ်, ဒါပေမဲ့အရေပြားအပေါ်ယံအခြောက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ "ဆာ" သူတို့ရှိပါလျှင်မျက်နှာပေါ်မှာကျယ်ဝန်းအပေါက်ကိုပိုမိုမြင်သာဖြစ်ကြသည်။ အောက်ဆီဒိုက်နှင့်ရောင်ဖြစ်လာမှကျရောက်နေတဲ့အမဲဆီပြွန်, ဒါကြောင့်နက်ရှိုင်းသောစင်ကြယ်စေတဲ့ function ပါတဲ့ cleanser ကိုသုံးစွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်အရက်နှင့်ဆပ်ပြာနှင့်တကွ, ရန်လိုအလှကုန်စွန့်ခွာဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် (နံနက်နှင့်ညနေပိုင်း) - အဝတ်လျှော်, သန့်စင်ဆေးရည်, Tone, သွေးရည်ကြည်လျှောက်လွှာ။ ကျယ်ဝန်းအပေါက်နှင့်အတူအဆီပြန်အသားအရေများအတွက်မုန့်ထားရန်မိတ်ကပ်ဖျော်ဖြေခြင်းမပြုမီ။ အက်ဆစ် (အေ့ဟေ, BHA) နှင့် retinol နှင့်အတူပိုကောင်းအလှကုန်။
1-3 ကြိမ်တစ်ပါတ်ကွာ။ အဆိုပါကြိမ်နှုန်းဟာအရေပြားအပေါ်ယံ၏ sensitivity ကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။
မျက်နှာဖုံးများတစ်လလျှင် 8-12 ကြိမ်။
cabin ထိန်းသိမ်းရေး (စက်မှုသန့်ရှင်းရေး မှလွဲ. ) 7-14 ရက်အတွင်း 1 အချိန်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ပိုင်ရှင်များရေခန်းခြောက်အရေပြားအပေါ်ယံအဆက်မပြတ်မျက်နှာ moisturize သငျ့သညျ။ အရေပြားအတွက်လျော့နည်းအစိုဓာတ်, ပိုအလုပ်ဆိကြည်ဂလင်း။ ထိုကြောင့်, မကြာခဏရမှတ်နှာခေါင်းနှင့်နဖူးနှင့်ပါးပြင်ပေါ် scaly ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူအပြိုင်အတွက် T-ဇုန်များတွင်အပေါက်ကျယ်စေ။ အတူအမျိုးသမီးများနေ့ ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေ ကိုသင်အရက်အလွန်အက်ဆစ်ပြင်းများ, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီနှင့်အခြားတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး components နဲ့အလှကုန်ကိုမသုံးသင့်ပါတယ်။
ယင်းမုန့်ကိုသုံးပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့အဝတ်လျှော်နည်းလမ်းများ (အမြှုပ်, လိမ်းဆေး), Tone, အသားအရေစိုပြေခြင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောပါဝါ။
Peeling တစ်ပတ်ကို 1 အချိန်ထက်ပိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာစံပွတ်တိုက်အလုပ်မလုပ်ဘဲ, ဏုမှုန်နဲ့ exfoliant ဝယ်ယူရန်အကြံပြုလိုတယ်။
အသားအရေစိုပြေခြင်းနှင့်အာဟာရအေးဂျင့်များနှင့်အတူပြောင်းဖို့တိုးချဲ့ပေါက်ထဲကနေမျက်နှာဖုံးများ, 2-4 ကြိမ်တစ်ပါတ်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။
တစ်ဦးအလှပြင်ဆိုင်ကုသမှုအဖြစ် Peeling, သန့်ရှင်းရေး၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားအမျိုးအစားများကိုစွန့်ခွာ, ခြယ်လှယ်ကြဲရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။
အများစုမှာအလှဆင်အလှကုန်အရေပြားဖော်ပြထားချွတ်ယွင်းအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ကြီးမားတဲ့အပေါက်များတိုးချဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိပါတယ် အကယ်. အချို့သောလိမ်းဆေးကအမြင်အာရုံကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနှင့်ပိုပြီးအောင်, သူတို့ကိုထဲမှာ "ကျရှုံး" ။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုတားဆီးရန်အတွက်ယခင်ကဥပမာမျက်နှာကိုဖို့အထူးဒေတာဘေ့စလျှောက်ထားကြပြီ
အဆိုပါ POREfessional အတှကျအကြိုး;
အစားအသောက်က Black ဥပေါက် Gel အခြေစိုက်အသားအရေ;
Revlon Photoready စုံလင်သော primer;
Maybelline New ကိုကလေးအရေပြားလက်ငင်းချွေးပေါက်နေတဲ့ Eraser ။
ခြေရင်းပြီးနောက် BB သို့မဟုတ်သည်လည်းကျယ်ဝန်းအပေါက်နှင့်အတူအသားအရေများအတွက်သင့်လျော်သောအခြေခံအုတ်မြစ်လျှောက်ထားသည်။ အရည်အသွေးရွေးချယ်စရာ:
မိတ်ကပ်စုံ Clinique ပေါက်သန့်စင်ပြီး Solutions လက်ငင်း;
Holika Holika အမွှေးအဝါအပေါက်အဖုံးကို BB;
ဒေါက်တာ , G ပေါက် + BB;
Maybelline ငါ့ကိုကွက်တိ! မက်တီ + Poreless;
Lancôme Teint အံ့ဖွယ်။
40 အပြီး facial
ခံတွင်း၌ Biopolymer ဂျယ် - အကျိုးဆက်များ
ပိုကောင်းတဲ့အရာ - တုအံကပ်?
တစ်ဦး trellis အပေါ်ကြီးထွားလာသခွားသီး
အံ့ဖွယ်အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေတွမ် Hardy နှင့်သူ၏ဇနီး,
Quince ၏ Marmalade
အဆိုပါ Genie ခေါ်ခြင်းဘယ်လိုနေသလဲ?